अमेरिकाविरुद्ध नेपालका चार कीर्तिमान | Hamro Khelkud
अमेरिकाविरुद्ध नेपालका चार कीर्तिमान
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – युवा ब्याट्सम्यान रोहित कुमार पौडेल र कुशल भुर्तेलको अर्धशतकको सहयोगमा नेपालले आइसिसी विश्वकप लिग-२ त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिजको पहिलो खेलमा अमेरिकालाई ५ विकेटले पराजित गरेको छ ।
अमेरिकाले प्रस्तुत गरेको २ सय ३१ रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको नेपालले ४९ ओभरमा ५ विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो । युवा ब्याट्सम्यान रोहित कुमार पौडेल ८७ बलमा २ चौका र ३ छक्का सहित ६२ रनमा अविजित रहँदै नेपालको जित पक्का गराए । ओपनर कुशल भुर्तेलले ९३ बलमा ३ चौका र ३ छक्का सहित सर्वाधिक ८४ रनको योगदान दिए । विकेटकिपर विनोद भण्डारी ४८ बलमा २ चौका र १ छक्का सहित ३७ रनमा क्याच आउट भए ।
त्यसअघि अल अमरेत क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको अमेरिकाले निर्धारित ५० ओभरमा ९ विकेट गुमाउँदै २ सय ३० रन बनाएको थियो । अमेरिका विकेटकिपर मोनांक पटेलले १ सय १४ बलमा ९ चौका र १ छक्का सहित सर्वाधिक १ सय रनको शतकीय इनिङ खेलेपनि टोलीले जित्न सकेन । अमेरिकाविरुद्ध खेलको क्रममा नेपालका बनेका चार कीर्तिमानहरु यस प्रकार छन् ।
४. ज्ञानेन्द्रको ओडिआईमा सर्वाधिक कप्तानी
अमेरिकासँगको खेलसँगै ज्ञानेन्द्र नेपालबाट ओडिआईमा सर्वाधिक खेलमा कप्तानी गर्ने कप्तान बनेका छन् । ज्ञानेन्द्रले नेपालबाट ७ ओडिआईमा कप्तानी गर्दा ५ मा जित र २ मा हार बेहोरेका छन् । पूर्वकप्तान पारस खड्काले ६ खेलमा कप्तानी गर्दा ३ जित र ३ मा हार बेहोरेका छन् ।
३. ओडिआईमा ओपनरको रुपमा कुशलको उच्च प्रदर्शन
अमेरिकालाई पराजित गर्न कुशल भुर्तेलले सर्वाधिक रन बनाएका थिए । उनी नेपालबाट ओपनरको रुपमा एकै खेलमा सर्वाधिक धेरै रन बनाउने खेलाडी हुन् । यसअघि नेपालको ओपनरको रुपमा सर्वाधिक धेरै रन ओमानविरुद्ध कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले ५६ रन बनाएका थिए । कुशलले ओपनिङ गर्दै ८४ रन बनाए । जुन नेपाली ओडिआईको तेस्रो ठूलो रन हो । यसअघि एकै खेलमा सर्वाधिक रन पारसको नाममा छ । पारसले २०१९ मा युएईविरुद्ध १ सय १५ रनको शतकीय इनिङ खेलेका थिए । रोहितले यसै साता पपुवा न्युगिनीविरुद्ध दोस्रो खेलमा ८६ रन बनाउँदै दोस्रो स्थानमा रहेका थिए ।
२. पहिलो र पाँचौ विकेटका लागि उच्च साझेदारी
अमेरिकालाई पराजित गर्न नेपालबाट दुई कीर्तिमानी साझेदारी भएका थिए । पहिलो विकेटका लागि आसिफ शेख र कुशल भुर्तेलले ६६ रनको साझेदारी गरेका थिए । जुन पहिलो विकेटका लागि नेपालबाट भएको सर्वाधिक ठूलो साझेदारी हो । यसअघि पहिलो विकेटका लागि विनोद भण्डारी र ज्ञानेन्द्र मल्लले युएईविरुद्ध २०१९ मा ६१ रनको साझेदारी गरेका थिए ।
अमेरिकालाई पराजित गर्न विनोद र रोहित कुमार पौडेलले पाँचौ विकेटका लागि ८३ रनको महत्वपूर्ण साझेदारी गरेका थिए । यसअघि पाँचौ विकेटका रुपमा सर्वाधिक ठूलो साझेदारी पारस खड्का र रोहितले २०१९ मा यूएईविरुद्ध ५४ रनको गरेका थिए । समग्रमा नेपाली ओडिआईको तेस्रो ठूलो साझेदारीमा पर्दछ । नेपालबाट ओडिआईमा सर्वाधिक ठूलो साझेदारी ८९ रन छ । पिएनजीविरुद्ध दोस्रो खेलमा ज्ञानेन्द्र र रोहितले तेस्रो विकेटका लागि गरेका थिए ।
१. रोहितको कीर्तिमानी अर्धशतक
अमेरिकालाई ५ विकेटले हराउन रोहित नायक बन्दै ८७ बलमा २ चौका र ३ छक्का सहित ६२ रनमा अविजित रहनेक्रममा दुई नयाँ कीर्तिमान बनाएका थिए । रोहित नेपालबाट ओडिआईमा तेस्रो अर्धशतक प्रहार गर्ने पहिलो खेलाडी बनेका छन् । त्यस्तै उनी नेपालबाट ओडिआईमा लगातार दुई अर्धशतक प्रहार गर्ने पनि पहिलो खेलाडी हुन् । ओडिआईमा नेपालबाट कुल नौ खेलाडीले अर्धशतक प्रहार गरेका छन् । तीन अर्धशतक प्रहार गर्ने रोहित एक्लो खेलाडी हुन् ।